ယူပါ…June 28 , 2011 | 1,530 views
Saving Private Ryan ဆိုတဲ့ကားကို တော်တော်များများကြည့်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်…။
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဇာတ်ကွက်တိုင်းဟာ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝစွာ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ အနုပညာမြောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…။ မြောက်များစွာရရှိသွားတဲ့ Oscar ဆုတွေနဲ့လည်း တကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ…။
အဲ့ဒီ့ဇာတ်ကားထဲမှာ သင်ယူစရာတွေ၊ သံဝေဂရစရာတွေ၊ မှတ်သားစရာတွေ၊ သတိထားစရာတွေ အမြောက်အများပါခဲ့ပါတယ်..။ အဲ့ဒီမြောက်များစွာထဲက ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အခုအချိန်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက် နေရာယူနေတဲ့ စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်…။ (more…)
Share this:More	Cateogry : Article , Personal |7Comments	၉/ခ စံပယ်May 23 , 2011 | 1,146 views
ဇူလိုင်..။ သြဂုတ်..။ စက်တင်ဘာ..။ အောက်တိုဘာ..။ နိုဝင်ဘာ..။ ဒီဇင်ဘာ..။ ဇန်န၀ါရီ…။ ဖေဖော်ဝါရီ..။ မတ်…။ ဧပြီ…။ မေ…။
အချိန်တို့သည် ထင်တာထက်ပိုပြီး လျှင်လျှင် မြန်မြန်ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်..။ ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တာ ၁ နှစ် နီးပါးရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ အချို့အတွက် မသိသာပါဘူး..။ မထူးခြားပါဘူး..။ အချို့အတွက်တော့ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်မပြောနဲ့ တစ်စက္ကန့်ဆိုတဲ့ အချိန်ပိုင်းလောက်နဲ့ တင် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်အတွက်တော့ ဒုတိယအမျိုးအစားက အကြုံးဝင်ပါတယ်..။ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်လိုကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိလောက်အောင်ကို လုပ်စရာတွေက စနစ်တကျ ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘ၀အမျိုးအစားအရ ဒါဟာ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး…။ စာဖတ်သူတွေအတွက်လည်း ထူးဆန်းမယ် မထင်ပါဘူး..။ ဒီကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ…။ ခံစားချက်တွေဟာ အမျိုးစုံသလောက် ရသလည်း စုံလှပါတယ်…။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေထဲက ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုအကြောင်း ကျွန်တော် ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်…။ ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရလို့ ကုန်ဆုံးသွားမယ့် တစ်စုံတစ်ခုသော မိနစ်ပိုင်း စက္ကန့်ပိုင်းအတွက် မပြောပလောက်သော ပမာဏလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ အကျိုးရှိကောင်း ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်…။ (more…)
Share this:More	Cateogry : Article , Personal |2Comments	ဒုတိယကမ္ဘာ (သို့မဟုတ်) …November 28 , 2009 | 2,350 views
သက္ကရာဇ်အားဖြင့် AD 3000 ဘက်သို့ ချဉ်းနှင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…။
ကမ္ဘာ၏ ဗဟိုလည်မှတ်မှု စနစ်များ တိမ်းစောင်း လွဲမှားစပြုလာခြင်းမှအစ…။ သတ္တ၀ါ (အဓိက လူ) တို့၏ ခံယူချက်နှင့် အတွေးအခေါ်များ တရှိန်ထိုး ပြောင်းလဲလာခဲ့သည့်နောက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကြောက်မယ်ဖွယ်ရာ တော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေတော့သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ အက်ဆေး နောက်ပိုင်းတွင် သတ္တ၀ါ ဆိုသောဝေါဟာရအစား လူ ဆိုသော ဝေါဟာရ ဖြင့်သာ ဆက်လက်ရေး သားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဤအက်ဆေးသည် လူ များကိုသာ ရည်ရွယ်ကာ ရေးသား ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်..။)
ထိုတော်လှန်ရေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ “ဒုတိယကမ္ဘာတော်လှန်ရေး (သို့) သက်ရှိဝါဒ တော်လှန်ရေး” လို့ ခေါ်ဆို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်…။
တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာရခြင်း၏ အဓိကဇစ်မြစ်မှာ အကြောင်းအရာမှာ လူသားတို့၏ စကားလုံးနှင့် ဝေါဟာရများကို ဖောင်းပွစွာတီထွင်ခဲ့ကြ ခြင်း၊ သုံးစွဲ (သို့) သတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းတို့ကြောင့် စတင်ခဲ့ပါတယ်..။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှ စစ်ပွဲများနှင့် တော်လှန်ရေးသမိုင်းများ ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြမည်ဆိုပါက လူသားအချင်းချင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲများ၊ တော်လှန်ရေးများသာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်…။
ထိုအချိန်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသော စာရေးဆရာများ၊ သိပံ္ပပညာရှင်များက လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိနေသော သက္ကရာဇ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော စစ်ပွဲများ၊ တော်လှန်ရေးများမှာ လူသားနှင့် အခြားကမ္ဘာမှ အန္တာရယ်များ၊ လူသားနှင့် စက်ယန္တာယားတို့၏ စစ်ပွဲများပင် ဖြစ်ပေါ်လာလိ့မ်မည်ဟု ကြိုတင်ခန့်မှန့်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်..။ သို့သော် ထိုဟောကိန်းများသည် တစ်ကယ်တမ်းတွက် လုံးဝ မှားယွင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။ ထိုကဲ့သို့ မှားယွင်း သော ဟောကိန်းများ ထုတ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူသားတို့နှင့် အနီးကပ်ဆုံးတွင် ထာဝရတည်ရှိခဲ့သော သက်မဲ့အရာဝတ္ထု များအပေါ် မေ့လျော့နေခဲ့ ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်…။
ရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ် (လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်) များအရ သက်ရှိနှင့် သက်မဲ့များ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ် အမျိုးမျိုးခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်…။ သက်ရှိမှန်လျှင် အသက်ရှူရမည်။ သက်ရှိမှန်လျှင် ခံစားချက်ရှိရမည်။ သက်ရှိမှန်လျှင် အသိဥာဏ်ရှိရမည်။ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်…။ ၎င်းတို့ ထိုကဲ့သို့ ခြေအငြိမ်မနေ လက်အငြိမ်မနေ ဝေါဟာရများနှင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် ချက်များကို ချခြင်တိုင်းချ၊ ထုတ်ခြင်တိုင်း ထုတ်ခဲ့ခြင်းများ၏ ရလာဒ်များအနေဖြင့် လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှ လူသားများ ယခုအခါ အလူးအလဲ ခံနေကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။
၂၉ ရာစုနှစ်မတိုင်မှီ အထိတည်ရှိခဲ့သော ထိုရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့် အတွေးချော် ပညာရှင်များသည် ထိုကဲ့သို့မှားယွင်းသော အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဟောကိန်းများကို ထုတ်ခဲ့ရုံသာမက လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသော “ဒုတိယကမ္ဘာတော်လှန်ရေး” ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် အဓိက အစပျိုး မျိုးစေ့ချပေးခဲ့ကြသော သမိုင်းတရားခံများလည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ မည်သည့်အရာများသည် သက်ရှိများဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာများသည် သတ်မဲ့များ ဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင် များပီပီ ပြီးပြီးရော သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးသည့်နောက်တွင်….။ ထိုသူတို့မှပင် တစ်ဖန် သက်မဲ့များသည် အသက်ရှူကြကြောင်း….။ သက်မဲ့များတွင် ခံစားချက်များရှိကြောင်း..။ သက်မဲ့ များတွင် အသိဥာဏ်များရှိကြောင်း စတင်ဖော်ထုတ်ကာ ပြသနာအား မီးစမွှေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်….။
နေရာမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သက်ရှိသက်မဲ့ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိရေး ဌာနကြီးရဲ့ အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်း ဖြစ်ပါတယ်…။ ခန်းမရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြီးအကဲ များထိုင်ရန်သတ်မှတ်ပေးထားသော စင်မြင့်နှင့် မိန့်ခွန်းပြောစင် ရှိပါတယ်..။ ကျန်တဲ့ ခန်းမတစ်ခုလုံးမှာ ရှိသည့် ခုံများကိုတော့ Column သုံးခု ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်..။ လက်ဝဲဘက်အစွန်ဆုံးတွင် လူမဟုတ်သော သက်ရှိများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက နေရာယူကြပါတယ်..။ အလယ် Column တွင် လူသားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ နေရာယူ ကြကာ။ လက်ယာအစွန်ဆုံးတွင်တော့ ယခင် သက်မဲ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသော သက်မဲ့များ (၀ါ) သက်ရှိများ စာရင်းတွင် အကြုံးဝင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသော သက်မဲ့များမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များက နေရာယူထားကြပါသည်။ (လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၏ အစည်းအဝေးခန်းမကို မျက်လုံးထဲ မြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်)
အစည်းအဝေးခန်းတစ်ခုလုံးကို အကြမ်းဖျဉ်းခွဲခြားကြည့်လိုက်ပါက…။ လောကတွင် (လူမပါ) သက်ရှိများ၊ သက်မဲ့များ များစွာရှိသည့်အနက်…။ ကျန်သော အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၆၆.၆၆ သာ အစည်း အဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရရှိကာ လူလည် (အလယ် Column မှာထိုင်သောကြောင့် လူလည် လို့ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “လူလယ်” နှင့် မမှားကြပါကုန်…။) များမှာမူ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့များအားလုံး၏ ၃၃.၃၃ ရာခိုင်နှုန်း စာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိနေခြင်းမှာမူ…။
Share this:More	Cateogry : Essay | 11 Comments	မိုးစက်ကြွေJuly5, 2009 | 1,303 views
မိုးဖွဲများ ဖြေညှင်းစွာ စတင် ကျဆင်းလာပါတယ်…။
ညင်သာစွာ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ လေနုအေးတစ်ချက် အမှတ်တမဲ့ သူ့ရင်ခုန်သံအချို့ကို ကျီစယ်သွားပုံက မထေမဲ့မြင်နိုင်လှပါတယ်…။ သိစိတ်တစ်ဝက် မသိစိတ်တစ်ဝက်နဲ့ သတိထားမိတော့မှ သူ့ခြေလှမ်းတွေ အခန်းနဲ့အပြည့်တပ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေဆီကို ဦးတည် နေကြောင်း သူ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်…။
ခပ်ဟဟ ဖြစ်နေတဲ့ ပြတင်းပေါက်တံခါးကို သူဆွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်…။ အဆုံးအစမဲ့စွာ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြေတစ်ချို့နဲ့ အတူ ပိုင်ရှင်မဲ့ မိုးစက်တွေ သူ့ရဲ့ပါးပြင်ပေါ်ကို အလုအယက်….။ သို့မဟုတ်….။ အားကိုးတကြီး လာရောက်ဖက်တွယ်ကြပါတယ်။ အင်းလေ….။ သူတို့လည်း ဒီလောက်အေးစက်နေတဲ့ အပြင်လောကမှာနေရတာ ချမ်းလောက်ရောပေါ့…။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ အခုလိုပဲ နွေးထွေးတဲ့နေရာ တစ်ခုခု ကို ခိုနားရကောင်းရဲ့ဆိုပြီး မျှော်လင့်ဖူး….။ မျှော်လင့်ဖူးခဲ့ကြမှာပေါ့…။
မိုးစက်အချို့ ပြတင်းပေါက်ဘောင်တစ်လျှောက် ဟိုနား…။ နောက်…။ ဒီနား…။ စုစုဝေးဝေး….။ ပြန့်ကျဲလို့ နားနေကြလေရဲ့….။ ကောင်းကင်ခရီးကို ဖြတ်သန်း ပျံသန်းလာကြရတာ သူတို့အတွက် သိပ်ကိုမောပန်းသတဲ့လေ…။ တစ်နေ့တော့ မြေပြင်ခရီးကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့သူတွေ အကြောင်း သူတို့ကို ပြောပြရပါဦးမယ်…။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သ လောက် တီးခေါက်ကြည့်ရပါဦးမယ်…။ ထားပါလေ…။ ကောင်းကင်ပေါ်ကို ရောက်ပါ့မလား..။ မရောက်နိုင်ဖူးလား ဆိုတာထက်…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိထားတော့ မကောင်းဘူးလားလေ…။
တကယ်တော့ ဒီမိုးစက်တွေဟာ မှားယွင်းသော ခိုလှုံရာကိုရှာခဲ့ကြတာပါ…။ အေးစက်မှုတွေနဲ့ စတင်ဖွဲ့တည်လာခဲ့တဲ့ သူတို့ဘ၀တွေ ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့အတွက်….။ ပျော်သည်ဖြစ်စေ မပျော်သည် ဖြစ်စေ…။ သူတို့ဟာ အဲ့ဒီ့အေးစက်မှုတွေ ကြားမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ လိုပါလိ့မ်မယ်…။ နွေးထွေးမှုကို မိုက်မဲစွာ ရှာဖွေခဲ့တဲ မိုးစက်အချို့…။ သူတို့တောင့်တခဲ့ကြတဲ့ နွေးထွေးမှုကိုရတဲ့အခိုက်….။ မကြာခင်မှာပဲ ခြောက်ခမ်းကွယ်ပျောက် သွားကြလေရဲ့….။
တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ နွေးထွေးမှုကို အခုလိုမိုက်မဲစွာ ရှာဖွေ ခိုလှုံခဲ့ကြဖူးတဲ့ မိုးစက်တွေဟာ…။ အသစ်အသစ်သော နောင်ဖြစ်လာမယ့် မျိုး ဆက်သစ် မိုးစက်တွေအတွက် မဖြစ်မနေ သင်ယူစရာ သင်ခန်းစာ တစ်ခုများ ဖြစ်လာလေမလား….။
ညဉ့်သည် တဖြေးဖြေးချင်း အချိန်၏တိုက်စားခြင်းကို ခံတုရင်းဖြင့် ကျရှုံးလို့လာနေပါတယ်…။ တကယ်တော့ အလင်းရဲ့အင်အားကို တောင့်ခံနိုင်တဲ့ အမှောင်ဆိုတာ ဘယ်ရာဇ၀င်မှာမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူးလေ…။ မိုးစက်တွေ….။ မိုးစက်တွေ….။ ဆက်လို့သာ ကြနေကြလေရဲ့…။ နီမြန်းနေတဲ့ ကောင်းကင် အောက်…။ မိုးစက်အချို့ လမ်းပျောက်နေကြတယ်…။ မိုးစက်အချို့ လမ်းဖောက်နေကြတယ်…။
မာကျူရီ မီးလုံးနားက ခရီးဆက်ခဲ့တဲ့ မိုးစက်အချို့က ၀ါဖန့်ဖန့်အရောင်တွေနဲ့…။ တံခါးပိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ခန်းတစ်ခုရဲ့ “ကြိုဆိုပါတယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုင်း ဘုတ်မှာထွန်းထားတဲ့ အစိမ်းရောင် မီးသီးတွေနားက မိုးစက်အချို့ကတော့ ခပ်စိမ်းစိမ်း…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ…။ ၀ါဖန့်ဖန့်အရောင်နဲ့ ခရီးဆက်သွား တဲ့ မိုးစက်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်…။ အစိမ်းရောင်တွေနဲ့ ခရီးဆက်သွားတဲ့ မိုးစက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်…။ အနဲနဲ့အများတော့…။ ပိန်းပိတ်အောင် ကျယ်ပြောနေတဲ့ ကောင်းကင်အောက် ဘယ်သူမှ သတိမထားမိလိုက်ပဲ တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားကြတဲ့ မိုးစက်တွေထက်စာရင်တော့…။ အဲ့ဒီ့ မိုးစက်တွေထက် စာရင်တော့….။
လှပတဲ့ညတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်..။ တကယ်တမ်း…။ အမှောင်ဟာ ဓားစာခံတစ်ယောက်ပါ…။ တစ်ခါတစ်လေ မရေမတွက်နိုင်သော ကြယ်ရောင်စုံတွေ ရဲ့ အလှကို လူတွေချီးမွမ်း ထောပနာ ပြနိုင်ကြဖို့အတွက် အမှောင်ဟာ ဗီလိန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသုံးတော်ခံပါတယ်…။ ဘာပဲပြောပြော အမှောင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှသတိမထားမိလိုက်ပဲ ခရီးဆက်ရင်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ မိုးစက်တွေဟာ အနဲဆုံးတော့ အခြားမိုးစက်တွေလို အရောင်တွေ အဆိုးမခံ လိုက်ရဖူးပေါ့လေ…။ ကံကောင်းပါစေ မိုးစက်တွေရေ….။
Share this:More	Cateogry : Essay | 19 Comments	ဂီတထွက်ပေါက် ၃June 25 , 2009 | 1,064 views
ညစ်နေတယ်ဗျာ..။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး..။ လူမှုရေး..။ ပညာရေး..။ ဘ၀ရှေ့ရေး..။ အားလုံးပဲ…။ အမြန်ဆုံးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်..။ စာတွေ ပုံမှန်ဆက်ရေးဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ်…။ အခုတော့ ညစ်ညစ်နဲ့ သီချင်းတွေချည်းလှိမ့်နားထောင်နေပါတယ်..။ ကျွန်တော့်လိုပဲ Down နေ တဲ့သူတွေအားလုံး ခံစားလို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ အပြင်းမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး…။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာပဲလုပ်လုပ် တစ်ဘက်စွန်းကို ရောက်တတ်လေတော့..။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်..။ ကျွန်တော့်အယူအဆ…။ ကျွန်တော့် အတွေးအခေါ်တွေဟာလဲ..။ သူများနဲ့တော့ နဲနဲကွာခြင် ကွာဟနေပါလိ့မ်မယ်…။ ကြိုက်တဲ့သူက ခံစားလိုက်ပါ..။ မကြိုက်တဲ့လူကတော့ ပိတ်လိုက်ရုံ ပေါ့ဗျာ..။
P.S- ထွက်ပေါက်ပျောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ..။
Share this:More	Cateogry : Video Clip | 13 Comments	မမေ့ကြောင်း…June 18 , 2009 | 1,019 views
သိတဲ့သူတွေလည်း သိချင်ရင် သိလိမ့်မယ်..။ သိချင်မှလည်း သိလိမ့်မယ်…။ သတိရတဲ့သူတွေလည်း ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်..။ ရှိချင်မှလည်းရှိလိမ့်မယ်…။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် မမေ့သေးဘူးအစ်ကိုရေ…။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့တစ်ခုဖြစ်ပါစေ အစ်ကိုကြီး ကိုစိုးထက်ရေ…။
Share this:More	Cateogry : Personal |9Comments	လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းJune3, 2009 | 1,153 views
သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ လမ်းတွေကိုဘယ်အရာနဲ့ လှမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသလဲ…? ကျွန်တော်ရော ဘယ်အရာဖြင့် လျှောက်နေတယ်လို့သင်ထင်ပါ သ လဲ?
သင်သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ခဲ့ဖူးပါသလား…? အမြင် နဲ့ အသံဟာ ထောင့်မှန်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့….။
သူ လျှောက်လက်စ လမ်းကိုသာ ဆက်လျှောက်နေလိုက်ပါတယ်…။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်အလေးအနက်ကြီးမဟုတ်တောင် တစ်ချက်ချက် တော့ လူ့သဘာဝအတိုင်း ခပ်စောင်းစောင်း သတိထားမိတာပေါ့…။ သူ လျှောက်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်အသံကိုမှ တစ်ချက်လေး လောက်မျှ တောင် တည့်တည့်မတ်မတ် မကြားခဲ့ရပါဘူး..။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့ တော်တော်များများရှိပါတယ်…။ လူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေရွဲ့ နေကြလို့…။ ဒါမှမဟုတ် နှုတ်ခမ်းတွေပေါ်က ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးတွေကိုယ်တိုင်က ရွဲ့စောင်းနေကြလို့..။ ဒါမှမဟုတ် လူတွေရဲ့ အတွင်း စိတ်တွေက ရွဲ့စောင်းနေကြလို့…။ ဒါမှမဟုတ်…။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမာမြေကြီးကို တိုင်က ၂၃ နှစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း ဒီဂရီ ရွဲ့စောင်းနေလို့…။ ဒါမှမဟုတ် အခြား အခြားသော အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်…။
ဒါပေမယ့် အသံတွေကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အခုချိန်ထိ သူ့နားထဲကို တည့်တည့်မတ်မတ် ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းမရှိသေးပါဘူး..။ သူ မျက်နှာမူ ရာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် (သို့မဟုတ်) သူ့ ဦးတည်ရာကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် အသံတွေဟာ သူ့ရဲ့လားရာတွေနဲ့ ထောင့်မှန်ကြနေပါတယ်…။ သိပ်ပြီး တော့ ထွေထွေထူးထူး မစဉ်းစားကြပါနဲ့…။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နားတွေဟာ နဖူးပေါ်တက် ပေါက်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ…။ နားထင် နားတွင် ပေါက်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်…။ တကယ်လို့များ နားတွေဟာ အခုလို နားထင်နားမှာပေါက်တာမဟုတ်ပဲ နဖူးပေါ်၊ နှာခေါင်းပေါ်၊ မျက်ခုံးပေါ် အစရှိသည့် အရှေ့မျက်နှာစာပြင်ဘက်တွင် ပေါက်နေကြမည်ဆိုပါက..။ ကျွန်တော်တို့ ကြားနေရတဲ့ အသံများသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံများထဲသို့ တည့်တည့်မတ်မတ် ၀င်ကောင်းဝင်လာနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်..။
ထောင့်မှန်ကျနေတဲ့ အသံတွေကို အရင်အတိုင်းမသိမသာ နားထောင်ရင်း သူ့ ခြေဖနောင့်တွေ ဦးတည်ရာသို့ သူ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လျှောက်နေ လိုက်ပါတယ်..။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ကောင်းမွန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် သင့်မှာရှိတဲ့ ဦးနှောက်တစ်ခြမ်း၊ မျက်လုံးနှစ်ဘက် နဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံ ဘယ်အရာဟာ ပိုအရေးကြီးမယ်ထင်ပါသလဲ…။ အဖြေမပေးမှီ သင့်ရဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့အရင် လမ်းလျှောက် ကြည့်ပါ။ ထိုအခိုက် အတန့် သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ခြေထောက်များကို လုံးဝအသုံးမပြုဖို့လိုပါလိ့မ်မယ်..။ ထို့နောက် သင့်ဦးနှောက်ဖြင့် တစ်ဖန်ထပ်ပြီး လျှောက်လှမ်း ကြည့်ပါ..။ ပထမ အခေါက်ကကဲ့သို့ပင် အခြားအရာနှစ်ခုဖြစ်သော မျက်လုံးနှစ်ဖက်နှင့် ခြေထောက်များကို အသုံးမပြုရပါ..။ နောက်ဆုံးတွင် သင့်ခြေထောက်များဖြင့် လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ…။ ထိုအခိုက် ဦးနှောက်နှင့် အမြင်အာရုံအား ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ လျစ်လျှူရှုကြည့်လိုက်ပါ။
Share this:More	Cateogry : Article , Essay | 19 Comments	ဆင်ခြေ…May 20 , 2009 | 1,132 views
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း စာမရေးဖြစ်ပါ..။ ဘယ်မှလည်း မရောက်ဖြစ်ပါ..။ အတိအကျ ပြောရရင် Blog လောကနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရင်းများကြောင့်ဟု ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါသည်..။
၁။ ဦးနှောက်စက်ရုံ အတွက် ကုန်ကြမ်းရှားပါးလာခြင်း။
၂။ ရေးပြီးသောစာများအား အားရကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့် မတင်ဖြစ်ခြင်း။
၃။ ရေးလိုက်သော စာများအား, အားရ ကျေနပ်လွန်းအားကြီးသောကြောင့် မတင်ဖြစ်ခြင်း။
၄။ စာရေးလိုက်တိုင်း လက်များ ဘရိတ်ပေါက်ပေါက်သွားသောကြောင့် အရှိန်သတ်ထားခြင်း။
၅။ စာရေးခြင်းထက် နည်းပညာပိုင်းနှင့်ဆိုင်သောဘက်တွင် အနဲငယ် ပိုမို အာရုံရနေခြင်း။
၆။ လုပ်ခြင်တာများ များနေသောကြောင့် ဘာမှ လုပ်မရခြင်း။
၇။ မု့န်ဖိုးရလိုရငြား ကိုယ်တတ်သည့်ပညာလေး (မဖြစ်စလောက်) နှင့် တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ၀င်ငွေရှာနေခြင်း။
၈။ စာမေးပွဲများ မဟားတရား နီးကပ်လာခြင်း။
၉။ စာကျက်ရန် စာအုပ်နှင့် Lecture များ ရှာမရခြင်း။
၁၀။ စာရေးခြင်စိတ် အလျဉ်းမရှိခြင်း။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ..။ ကျွန်တော် ဘလော့မပိတ်ပါ..။ ရပ်ပါဦးမည်…။ ပြန်ရေးနေပြီ ဆိုပြီး ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက် လုပ်မည်လည်းမဟုတ်ပါ..။ အရေးကြဲ ခြင်းသာလျှင် ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်…။ မရေးခြင်တဲ့ အဆုံး ပြစ်ထားရုံမှလွဲ…။ ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မည်မဟုတ်ပါ…။
ကျွန်တော့်အတွက် မနက်ဖြန်များစွာ ရှိနေပါသေးသည်..။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်တွင် ဖက်တွယ်ထားသော အိပ်မက်များစွာလည်း အတိအကျရှိနေပါ သေးကြောင်း…။
P.S- မကြာမှီ လာမည်….။ မျှော်….။
Share this:More	Cateogry : Personal | 16 Comments	တူညီသော ခြားနားချက်များ…April 23 , 2009 | 1,341 views
“သြော်….။ အခုတော့လဲ မင်းရောက်ပြီလာပဲ…”
တစ်ဘက်မှ စီးကြိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သူခပ်ရဲ့ရဲ့ အပြုံးတစ်ခုဖြင့်သာ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်…။ မလိုဘူးလေ…။ ဒီလူနဲ့ ဒီလူ လောက နီတိတွေ..။ အပေါ်ယံ စကားလုံးတွေ….။ ဒီလောက်ဆို သူ့ရင်ထဲရှိတာတွေကို သဘောပေါက်သွားမှာပါ…။
“အေးဆေးပေါ့ကွာ…။ ထိုင်…။ ရော့…။ ဆေးလိပ်လေးဘာလေးသောက်ဦး…။ အမောပြေမှ စကားပြောကြတာပေါ့…”
“ဟင့်အင်း…။ ငါဆေးလိပ်မသောက်တတ်တာ မင်းမေ့သွားပြီထင်တယ်….”
တစ်ဘက်မှ သူ့သူငယ်ချင်းက ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ငြိတ်ရင်း ပြုံးလို့သာနေပါတယ်…။
“ဘာပဲ ပြောပြောငါက ဒီနေရာကို မင်းအရင်ရောက်နေတာဆိုတော့ ငါက အိမ်ရှင်ပဲလေ..။ ဧည့်ဝတ်ကျေရပေမပေါ့…။”
သူဘာမှ ပြန်မပြောမိ…။ သူ့သူငယ်ချင်းကိုသာ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေမိသည်…။ တကယ်ကို မယုံနိုင်စရာပင်…။ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကြား ဘာတွေကွာခြားသွားခဲ့လဲ…? ဘယ်လိုအခြေအနေတွေက မတူညီမှုတွေကို ဖန်တီးခဲ့လဲ…။ တကယ်ဆို အနဲနဲ့အများတော့ တူညီနေသင့်တာပေါ့..။ အခုတော့…။ သူ့အတွက် အံ့သြခြင်းများစွာဖြင့် စကားတစ်ခွန်းသာ ဆိုနိုင်ခဲ့သည်…။
“မင်းအရင်လိုပဲ….။ ဘာမှ ပြောင်းလဲမသွားဘူးနော်….”
တကယ်တော့ သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဝေးကွာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…။ အတိအကျ နီးပါးပြောရရင် နှစ် (၄၀) နီးပါးပေါ့။ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆိုတာက တကယ့်ကို ညီအစ်ကိုပမာ..။ တိုင်ပင်ဖက်..။ ဆွေးနွေးဖက်…။ ငြင်းခုန်ဘက်…။ တူညီတာတွေရှိခဲ့သလို..။ သဘာဝ အတိုင်း မတူညီမှုတွေကလဲ ပုံမှန်မွေးဖွားခဲ့ကြတာ အဆန်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရာ…။ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်…။ မထင်မှတ် တဲ့နေရာမှာ သူတို့တွေ ခွဲခွာကြဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်…။ သူတုန်လှုပ်ခဲ့သလောက် သူ့သူငယ်ချင်းကတော့ ဘာမှမခံစားရသည့် အတိုင်း တကယ့်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တည်ငြိမ်လွန်းလှခဲ့သည်…။
သက်တူရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေဆိုပေမယ့်…။ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ…။ အယူအဆတွေ…။ အမြင်တွေဟာ သူ့ထက်ပိုမို တည်ငြိမ်ခဲ့ တာတော့ သူဝန်ခံရပေလိ့မ်မည်..။ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားလုံးတွေတိုင်းဟာ သူ့အတွက်တော့ ဘာသာဗေဒ အသစ်တစ်ခုလို အမြဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူအကြိမ်ကြိမ် နားလည်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်…။ သူ့အတွက်တော့ အလှမ်းဝေစမြဲ ဝေးနေခဲ့ဖူးပါတယ်..။ သူတစ်ခါတစ်လေ သူ့သူငယ်ချင်း ဘာ တွေကိုများ တွေးနေပါလိ့မ်…။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုများတွေးနေပါလိ့မ်လို့ သိချင်လွန်းလှပါတယ်…။
“မင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း ဘာမှမခံစားရသလိုပဲ..” သူရဲ့စကားဟာ ဟာသတစ်ခု မဟုတ်သည့်တိုင် ဘာကြောင့်များ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ နှုတ် ခမ်းတစ်စုံမှာ မထီတရီ အပြုံးတွေ ဖူးပွင့်ခဲ့ရပါသနည်း…။
“မင်းကိုငါပြောမယ်…။ ကြီးမားတဲ့ ကျောက်တောင်၊ တောင်တန်းကြီး တွေကအစ..။ သေးငယ်တဲ့ ကျောက်တုံးတစ်ခုအထိဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် သေးငယ်တဲ့ သာမန်မျက်စိနဲ့တောင် မမြင်နိုင်တဲ့ အမှုန်ပေါင်းများစွာနဲ့ စတင်ခဲ့ရတယ်..။ အဲ့ဒီ့ အမှုန်လေးတွေဟာ တဖြေးဖြေး အချိန်ကြာလာတာ နဲ့အမျှ ဖိအားတွေ၊ အပူတွေ၊ အနည်ကျမှုတွေကြောင့် တစ်ဖြေးဖြေးကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပြီးတော့ မာထန်တဲ့ ကျောက်တုံး ကျောက်ဆိုင်တွေ…။ နောက်ကျောက်တောင်တွေ..။ တောင်တန်းကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်…။”
“ဟိတ်ကောင်…။ ငါမေးတာနဲ့ မင်းပြောနေတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ…။ မင်းကပြောလိုက်ရင် အဲ့လိုတွေချည်းပဲ..။ အရင်းမရှိ…။ အဖျားမရှိ..။”
“ခဏနေဦးလေကွာ…။ ဆိုင်လာလိ့မ်မယ်…။ အဲ့ဒီ့တော့ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျောက်တုံးတစ်ခုဟာ သာမန်အားဖြင့် ခိုင်မာတယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ သဘာဝ ဖြစ်တည်မှုအစဟာ အင်မတန်ပျော့ပြောင်း သေးငယ်လှတဲ့ အမှုန်လေးတွေများစွာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ မင်းလက်ခံလောက်ပါပြီ…။”
သူ… သူ့သူငယ်ဆက်ပြောမယ့်စကားကိုသာ အာရုံစိုက်နေလိုက်မိပါတယ်…
” ဒီလိုပဲကွ…။ လူတစ်ယောက်ရင့်ကျတ်တယ်…။ ဒါမှမဟုတ် မင်းပြောသလို “ဒီကောင့်ကြည့်ရတာ ဘာမှခံစားတတ်မယ့် ပုံမပေါ်ပါဘူးကွာ” ဆိုတာမျိုး က အဲ့ဒီ့လူကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မင်းတို့ကတွေ့လို့သာ အဲ့လိုပြောနိုင်ကြတာ…။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကျောက်ဖြစ်သွားဖို့ ဆို တာ သေးငယ်တဲ့ ထိခိုက်ခံစားမှုတွေ…။ မမြင်နိုင်တဲ့ သောကအမှုန်တွေ..။ များပြားလှတဲ့ မြိုသိပ်မှုတွေကနေ တဖြေးဖြေးစတင်ခဲ့တာပဲ…။ အဲ့ဒီ့ သေးငယ် လှတဲ့ ခံစားမှုတွေ တဖြေးဖြေး စုပုံအနည်ကျလာတဲ့နောက်…။ ဘ၀ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားနဲ့ သောကရဲ့ အပူတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့ စိတ်အစုံဟာ ကျောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်…။ တကယ်ဆိုရင် အဲ့လိုဘာမှ မခံစားတတ်ဘူးလို့ မင်းတို့ထင်တဲ့သူတွေက မင်းတို့ ငါတို့တွေထက် အများကြီးခံစားတတ်…။ အဲ..။ ဒါမှမဟုတ်…။ ခံစားဖူးတဲ့သူတွေချည်းပဲကွ….။“
“ငါလာတဲ့ ကိစ္စကိုမပြောခင်…။ ငါသိခြင်တာ တစ်ခုကို မင်းအရင်ပြောပြနိုင်မလား..?”
” ဒီမယ်သူငယ်ချင်း…။ အခုအသက်အရွယ်ကြီးရောက်တဲ့အထိ မင်းမှာငါ့ကိုမေးစရာမေးခွန်းတွေ မကုန်နိုင်သေးဘူးလား…? ဒီလိုပဲ မင်းအမြဲ သူများ ကို လျှောက်မေးနေတာ မင်းကိုမင်းမေးဖို့ရော အချိန်ရသေးရဲ့လား…။ ဟမ်…။ ဟေ့ရောင်…”
“ဒါတွေထားစမ်းပါကွာ…။ ငါအခုမေးမှာကိုပဲ မင်းဖြေ…။ မင်းနဲ့ငါနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတာ ငါတို့ အသက် (၂၀) လောက်က အခုဆို ငါ့အသက် (၆၀) ကျော်ပြီ..။ တစ်နည်းအားဖြင့် ငါတို့မတွေ့ခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်လောက်ရှိပြီ…။ ဒီလောက်နှစ်တွေ အချိန်တွေကြာခဲ့တာတောင် ငါ့မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ များစွာဖြစ်ခဲ့သလောက် မင်းကျတော့ ဘာလို့ ဘာမှမပြောင်းလဲရတာလဲ….။ ဒါကို ငါသိခြင်တယ်…။”
“ဟား…ဟား..။ ငါဘာကြောင့် မပြောင်းလဲသလဲဆိုတာ မင်းကိုမပြောပြခင်..။ မင်းကို ငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်…။ မင်းတို့ အသက်အရွယ်ဆိုတာကို ဘာနဲ့တိုင်းလဲ ဟေ့ရောင်…”
“ဟ..။ အသက်အရွယ်ပါဆိုမှတော့ အချိန်နဲ့ တိုင်းရတာပေါ့ဟ..။ အချိန်နဲ့မတိုင်းလို့ မင်းကြီးဒေါ်ကြီးနဲ့ ငါကတိုင်းရမှာလား..”
“ဟဲ..ဟဲ..။ အေးဟုတ်ပါပြီကွာ..။ မင်းပြောသလို အသက်အရွယ်ကို အချိန်နဲ့မတိုင်းပဲ ငါ့ကြီးဒေါ်ကြီးနဲ့တိုင်းတာကမှ မင်းတို့အတွက် ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိဦး မလားပဲ…”
“နေစမ်းပါဦး…။ ဒါဆို မင်းက အသက်အရွယ်ဆိုတာကို အချိန်နဲ့ မတိုင်းတာခြင်လို့ ဘာနဲ့များတိုင်းတာခြင် သေးလို့လဲ…”
“လွယ်ပါတယ်ကွာ…။ အသိတရားနဲ့ တိုင်းတာမှာပေါ့…”
“ဘာ…! အသက်ကို အသိတရားနဲ့တိုင်းမယ်…? ဟုတ်လား…? ” သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားကြောင့် သူတော်တော်တွေဝေသွားမိသည်…။
Share this:More	Cateogry : Essay | 25 Comments	မှားယွင်းခဲ့သော နေထွက်ချိန်များApril 19 , 2009 | 1,958 views
Phone သံကိုပင် သူပြီးအောင်စောင့်မနေနိုင်တော့…။ ချင်ခြင်းပင်ကောက်ကိုင်လိုက်မိပါတယ်..။
သူ့လက်ထဲမှ လွတ်ကျသွားသော Mobile Phone ရဲ့အသံလော…။ သို့မဟုတ်…။ သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှ နုလုံးသား၏ အသံလော…။ သူတိတိကျကျ မပြောနိုင်သော တစ်ချိန်ထဲ တစ်ပြိုင်ထဲ ထွက်ပေါ်လာသည့် မြည်သံစွဲတစ်ခု….။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တစ်ပိုင်းတစ်စစီ ကျကွဲ သွားသော သူ့ရဲ့ Phone ဟာ…။ သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှ နုလုံးသားရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အတိအကျ နိမိတ်ထင်ဟပ် နေစေခြင်းပင်…။
သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးစီးများနှင့်သာ မောဟိုက်လို့နေပါတယ်…။ တစ်ဘက်မှစကားသံအဆုံး သူ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအမှောင် ကျသွားပါတယ်..။ ခန္ဓာ ကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အတွင်းအပြင် ဆွဲလှန်လိုက်သလို ဝေဒနာက နာကြည်း သည်းထန်လွန်းလှပါတယ်…။ တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်အတွေးတွေ က အခုချိန်မှာ သူ့ဘ၀ကို တကယ်ပင် အမှောင်အတိ ဖုန်းစေခဲ့ပါပြီ…။ သူ့ဘ၀ရဲ့ တက်လမ်း…။ ရည်ရွယ်ချက်…။ ရှေ့ရေး…။ အရာရာဟာ စုတ်ပြတ်သွားပါတော့မယ်…။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု…။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ တရားခံဟာ သူမှလွဲပြီး အခြားဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်…။ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ်…။ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ မသိစိတ်…။ အားပြိုင်မှု နှစ်ခုကြား သူ့ဘ၀လုံးပါးပါးတော့လေမည်…။
တကယ်ဆို ဒါတွေဟာ သူ့ရဲ့ အသုံးမကျမှု…။ တွေဝေမှုတွေကြောင့်ဆိုတာ သိပ်ထင်ရှားလွန်းပါတယ်…။ ခံစားချက်တစ်ခုရဲ့ အမြင့်မားဆုံးနေရာ တစ်ခု…။ ခပ်သိမ်းသော အသိစိတ်တို့ မှိတ်သုန်း ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်…။ ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ အသိတရားတစ်ခု လုံးပါးပါးခဲ့တယ်..။ အရာရာဟာ စိတ်ရဲ့ စေရာနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ပြီးမှတော့…။ ခါးသီးတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုကလွဲလို့ ဘာများသူ့အတွက်မျှော်လင့်စရာ ရှိဦးတော့မတဲ့ လဲ…။ ဆူပွက် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ အတွေးတွေကြား…။ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုအတွက် အချိန်တွေကလဲ ခပ်ပါးပါးတောင် မျက်နှာသာပေးခြင်ပုံမရတော့ပါ။
ဘာလုပ်မလဲ…။ ဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ…။ ဘာတွေက ဖြစ်သင့်တာလဲ…။ ဘာတွေက ဖြစ်ခဲ့ပြီလဲ…။ မေးခွန်းတွေ…။ မေးခွန်းတွေ…။ အဆက်မပြတ် သူ့ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သတ်သွားသည်….။ သူ့အသွေး…။ သူ့အသား…။ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး အက်စစ်ကန်ထဲ အစိမ်ခံထားရသလိုခံစား ရသည်…။ အကြိမ်ကြိမ် ချုပ်တည်းခဲ့တဲ့ အသိစိတ်တစ်ချက် လွတ်အထွက်မှာ…။ ဘ၀ဟာ ဒီလောက် စုတ်ပြတ်သွားမယ်မှန်း ဘယ်တုန်းကမှ သူ မမှန်းစမိခဲ့ပေ…။ ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ အရိပ်ဆိုးတစ်ခု….။ ဘ၀အဆက်ဆက် သံသရာရှည်တော့လေမည်သာ….။
“ငါမသတ်ဘူး…။ မင်းကို ငါမသတ်ဘူး…။ ငါသတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာ….”
“ဟား..ဟား…။ ခင်ဗျားဗျာ…။ ကိုယ့်အသတ်သေမှာတော့ ကြောက်တတ်လိုက်တာ…။”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ…။ ငါမင်းကို တကယ်မသတ်ခဲ့တာပါ…။ ငါ့ရဲ့ ပေါ့….ပေါ့….ပေါ့ဆမှု…။ အသုံးမကျမှုကြောင့် ဒီလို ဖြစ်….ဖြစ်…ဖြစ်ခဲ့ရတာပါကွာ”
“ခင်ဗျားဗျာ…။ ပြောထွက်လိုက်တာ…။ ကျွန်တော့်ဘာများလုပ်ခဲ့လို့လဲဗျာ…။ ကျွန်တော့်မှာ ဘာအမှားများရှိခဲ့လို့လဲ…။ ကျွန်တော့်မှာ ဘာအပြစ်များ ရှိခဲ့လို့ ခင်ဗျား ဒီလို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့ရတာလဲဗျာ…”
” ငါ…။ ငါ….။ ငါလေ…။ မင်းအပေါ် ရက်စက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ…။ အဲ့ဒါကိုတော့ မင်းယုံကြည်ပေးပါ…။ မင်းအတွက် တစ်ကယ်ပဲ ငါ့စိတ်တွေ ထိခိုက် ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်ကွာ…။ ငါ့….ငါ့…ငါ့မှာ အခြားရွေးစရာ လမ်းမရှိ …. မရှိ…. မရှိတော့လို့ပါကွာ…..။ ငါ့ကို…ငါ့ကိုလေ….။ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ငါမတောင်းဆိုလိုပါဘူးကွာ…။ ဒါပေမယ့်…။ ဒါပေမယ့်လေ…။ ငါ့ကို နားလည်ပေးဖို့တော့ ငါတောင်းဆိုခြင်ပါတယ်ကွာ…”
“မရတော့ဘူးဗျာ…။ အားလုံးဟာ လွန်သွားခဲ့ပြီ..။ ကျုပ်ကခွင့်လွှတ်တယ်ထား…။ ခင်ဗျားကို ခွင့်မလွှတ်တဲ့သူတွေက မကြာခင် ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ရပ်တွေ အတွက် လာခေါ်ကြလိ့မ်မယ်…။ ဟော ဟိုမှာ လာနေကြပြီ…။ ကဲ… ကျုပ်လည်းသွားမယ်ဗျာ…။ ကံမကုန်သေးရင်တော့ ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့..”
“ငါမသတ်ဘူး…။ ငါမသတ်ဘူး…။ မင်းကို ငါမသတ်ဘူး…။ ငါ့ကိုနားလည်ပါ…။ ငါ့ကိုနားလည်ပေးပါကွာ…။ ငါ့မှာ ရွေးစရာလမ်းတကယ်ကို မရှိခဲ့လို့ ပါ..။ ငါ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးလဲ မင်းအတွက် ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်ကွာ…။”
အကယ်၍ ဒီအရာသည်သာ အိပ်မက်တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလေလျှင်….။
“ဟားးးးးးး….” သူစီးကရက်တစ်လိပ်မှ နီကိုဒင်းအဆိပ်ငွေ့တွေအားလုံးကို အဆုတ်ထဲ အပြည့်ရှိုက်သွင်းလိုက်မိသည်..။
“ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..? ထွက်ပြေးလို့လဲ လွတ်မယ့်ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်တာကွာ…။ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပြီး..။ ပြင်ဆင်ကြရုံ၊ ရင်ဆိုင်ကြရုံပေါ့…”
တစ်ဘက်က တိတ်ဆိတ်လျှက်…။ သူတစ်ယောက်ထဲသာ စကားတွေ တောက်လျှောက်ဆက်ပြောနေမိသည်…။
“မင်းအတွက်လည်း ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာ…။ မင်းစိတ်ထဲမှာ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လောက်ခံစားနေမယ်ဆိုတာကို ငါသိပါတယ်…။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု လုံးလဲ သွေးကြောတွေထဲမှာ ချော်ရည်တွေ စီးဆင်းနေသလို ခံစားနေရပါတယ်…။ တစ်ကယ်ဆို ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ပေါ့ဆမှုတွေပါ…။ ငါ့ရဲ့ အသုံးမကျမှု တွေပါ…။ ငါ့ရဲ့ အသုံးမကျမှုတွေအတွက် ငါဝင်ခံပါတယ်…။ ငါ့အပြစ်တွေအတွက် ငါပေးဆပ်သွားချင်တယ်..။ ပေးဆပ်ခွင့်ရခြင်တယ်…။ ပေးဆပ် သွားလိုက်ခြင်တယ်…။ ဒါပေမယ့်ကွာ…။ ငါဘယ်လိုပဲ ပေးဆပ်ပေးဆပ်…။ ငါ့ကြောင့် အပြစ်မရှိတဲ့သူတစ်ယောက် ….။ ငါ့အပြစ်တွေ မကြေနိုင်ဘူး ဆိုတာ ငါသိပါတယ်ကွာ….။ ငါလေ…။ ငါ…..။ ငါ….အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်ကွာ….။ ဒါပေမယ့်….”
သူ့အသံတွေထဲ ရှိုက်သံတွေပါလာခဲ့သည်…။ သူ့လည်မျိုတစ်ခုလုံးစို့တက်လာသည်…။ သူ့ပါးပြင်တစ်လျှောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်သည့် “တောက်” ခေါက်သံတွေက တသွင်သွင် စီးဆင်းလျှက်…။
” ငါတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသာ ဆက်လုပ်ကြရုံပေါ့ကွာ…”
သူ ရှိုက်ကြီးတငင်ငင် ငိုချမိလိုက်သည်…။ သို့သော် သူ့ရင်ထဲက အပူတွေကတော့ ညိမ်သက်မသွားသည့်အပြင် ပို၍ ပို၍ တိုးလို့သာ…။
Share this:More	Cateogry : Essay | 23 Comments	Next Page »
I postedanew photo to Facebook fb.me/2aj7pABSc At6hours ago
ပင်ပန်းသမျှတွေ ပုံလေး တစ်ခါဖွင့်ကြည့်တိုင်း Like တွေ... fb.me/1K5NGnybU At2days ago
ဒီပုံလေးက ကျွန်တော်နောက်ဆုံး အခေါက်ငွေဆောင်ကို... fb.me/1YorTYybS At2days ago
ရာသီဥတုပူတယ်ဗျာ... ငွေဆောင်က ရေလုပ်သားတွေရဲ့ ဘဝကို ပင်လယ်ထဲ စိမ်ရင်း ခဏလောက် ခံစားကြည့်ရင် မကောင်းဘူးလား...? :) At2days ago
@Photography Tips မှာတွေ့လို့ သိမ်းထားတာ ကြာပါပြီ အခုမှ ပြန်ရှာတွေ့လို့ မှတ်မှတ်ရရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... fb.me/2NFqG9tsX At3days ago
ဘာပုံမှမတင်၊ ဘာပို့စ်မှ မရေးနိုင်တော့တဲ့နောက် ကျွန်တော့် Aperture21 | Lives Beyond The Light Page လေးရဲ့... fb.me/1f5vuHByR At4days ago
တီးနေတဲ့ Mode နဲ့ အရှေ့က ရေပန်းတွေက သင်္ကြန်နဲ့ဆရာချစ်ရဲ့... fb.me/2arsvRdlU At4weeks ago
Guestbook - 75,359 viewsTo…U Thant - 30,491 viewsAbout - 8,905 viewsNero 8 Ultra Edition V8.1.1.0 - 8,165 viewsBasic Tutorials For Beginner Photographers – Part (1) - 8,020 viewsကျွန်တော်နှင့် ပေတဒါန - 5,565 views၂၄ ခုမြောက် တံခါးတစ်ချပ်… - 5,419 viewsRevolutionary Road To Canon… - 4,849 viewsကျွန်တော်နှင့် သူမ (၄) - 4,326 viewsနှင်းဆီ ဈာပန - 4,284 views